Web | My Burmese Blog | Page 2
Posts Tagged: Web	Myanmar Genius
On January 7, 2009	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Myanmar news, Web	လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်က ကျွန်တော်ဆီကို အီးမေး တစ်စောင်ရောက်လာပါတယ်.. အဲဒါက Myanmar Genius ဆိုတဲ့ portal invitation စာပါ.. အခု လက်ရှိတော့ ကျွန်တော်လဲ အဲဒီမှာ အကောင့်လုပ်ပြီး စာဖတ်နေပါတယ်.. စာထဲက Myanmar Genius အကြောင်းကတော့..
Burma, Web	Continue Reading
On December 13, 2008	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Web 2.0	Remindr ဆိုတာ web ပေါ်မှာ alarm ပေးလို့ရတဲ့ နာရီ web 2.0 site တစ်ခုပါ။ အဲဒီမှာ ဘာ register မှ လုပ်စရာမလိုပဲ ကိုယ် alert လုပ်ချင်တဲ့ စာသားနဲ့ ဘယ် service ကို သုံးပြီး alert လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ရွေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။ သူ့မှာ Twitter, email, Jabber (GoogleTalk), Mobile Phone Number4မျိုးကနေ message ပို့ ပေးနိုင်ပါတယ်။
twitter, Web, Web 2.0	Continue Reading
Adobe, Cool, Web	7 E Book Search Engines
On December 12, 2008	by Htoo Tay Zar	With	10 Comments	- Web	ကျွန်တော် E Book ~ pdf တွေ ဖတ်စရာရှိတာတွေကို ရှာရင် အမြဲ free ရတဲ့ ဆိုဒ်တွေမှာ ရှာလေ့ ရှိပါတယ်။ ဆိုဒ်တွေ ဖတ်ရင် စာအုပ် အသစ်တွေထွက်ရင် အမြဲဖတ်ချင်တယ် ခက်တာက ကျွန်တော်တို့ ဆီမှာ အဲဒီ စာအုပ်တွေ ၀ယ်လို့ မရဘူး။ နောက် ၀ယ်ဖို့ အဲဒီ 30, 40, 100, 200, 500 တန် စာအုပ်တွေ ၀ယ်ဖို့လဲ ပိုက်ဆံ မရှိပါဘူး။ အဲဒီတော့ အရင်ဆုံး အခုတင်လိုက်တဲ့ PDF EBook Search Engine တွေမှာ လိုက်ရှာပါတယ်။ အဲဒီ ဆိုဒ်တွေမှာ နာမည်ကျော် စာအုပ်တွေ ဖရီး download လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ထွက်တာ မကြာသေးတဲ့ စာအုပ်လဲ ရတယ်။ နည်းပညာ၊ ဟာသ၊ ၀တ္တု၊ မဂ္ဂဇင်း အစုံ ရှာလို့ ရပါတယ်။ တော်တော် အသုံးတည့်ပါတယ်။ လောလောဆယ်တော့ Site Point က စာအုပ်တွေ အလကားရလို့ ပျော်နေပါတယ်။ ဖတ်ဖို့ မီးမလာတော့ လောလေဆယ် ဘာမှ လုပ်မရဘူး။ eBook, Web	Continue Reading
On December 11, 2008	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Web	Search.io ဆိုတာ search engine အသစ်တစ်ခုပါ အမှန်တော့ သူ့ကို engine လို့တောင် မခေါ်သင့်ဘူး ထင်တယ်။ သူက ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ web, image, video စတာတွေ အပေါ်မူတည်ပြီး နာမည်ကြီးဆိုဒ်တွေရဲ့ result တွေကို tab စနစ်နဲ့ ပြပေးတာပါ။ ဒါက အမှန်တော့ အရင်ပြောဖူးတဲ့ Google + Yahoo!! Search Engines တွေ နဲ့ တူတယ်။ Web	Continue Reading
On September 22, 2008	by Htoo Tay Zar	With	8 Comments	- Knowledge	Intertnet သုံးသူတိုင်း LOL, OMG!! စတဲ့ dictionary တွေမှာ ရှာမရတဲ့ စကားလုံးလေး တွေကို မြင်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါ စကားလုံးမျိုးတွေကို Internet ပေါ်မှာသာ မကပဲ mobile phone sms message တွေမှာ၊ IRC, Instant Message တွေမှာ ပါမြင်ဖူးပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီ စကားလုံးတွေက စာလုံးရိုက်ရတာ သက်သာစေဖို့ သုံးတဲ့ စကားလုံး ဘန်းစကားတွေပါ။ Phone message တွေမှာ ပို့တဲ့ စာလုံးရေ အကန့်အသက်ရှိတဲ့ အခါမှာ အဲဒီလို ဘန်း စကားလေးတွေ သုံးကြပါတယ်။ တချို့ကြတော့လဲ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ nick, id တွေ sign up လုပ်မရလို့ သုံးတာမျိုးလဲ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ – monkey ဆိုတာမျိုးမရတော့လို့ m0k3y မျိုးသုံးတာ တွေလဲ ရှိပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အတို စကားလုံးတွေက အသံထွက်ကို အခြေခံပြီး ရေးတာများပါတယ်။ ဥပမာ – this ကို dis, love ကို luv, that ကို tat dat, are ကို r, you ကို u စသဖြင့် မူရင်းအသံပုံစံ ထွက်တာမျိုးကို ရေးကြပါတယ်။ နောက် အများကိန်းနေရာမှာ သုံးတဲ့ s ကို z နဲ့လဲပြီးလဲ သုံးတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ – DJ boys ကို DJ boyz ပုံစံမျိုးပါ။ အထူးသဖြင့် သုံးတာတွေက s ကို z နဲ့ အစားထိုးသုံးတတ်ပါတယ်၊ t ကို7နဲ့ အစားထိုးတတ်ပါတယ်၊ l (L) ကို 1 နဲ့ အစားထိုးတတ်ပါတယ်၊ o (O) ကို0(zero) နဲ့ အစားထိုးတတ်ပါတယ်၊ h ကို 8 နဲ့ အစားထိုးတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ – Great ကို G8t ပုံစံမျိုးပါ။
Knowledge, Web	Continue Reading
Congratulation Firefox For Download Day 2008
On June 18, 2008	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Download, Firefox, News	” Mozilla launched Firefox3yesterday morning and immediately felt the love from millions of people all over the world joining us to setaGuinness World Record for most software downloaded in 24 hours. “
Mozilla systems were quite busy earlier this morning so individual requests may not have gotten through – but they are all up now and servingatremendous amount of traffic and downloads. We are currently serving almost 9,000 downloadsaminute, which puts us on track to achieve 5-7 million downloads our first day of general availability.
Via : Mozilla Blog
Firefox, Web	Newer Entries	Recent Posts